ငါနဲ့ငါ့ကွန်ပြူတာ | PoemsCorner
င့ါ ကွန်ပြူတာထဲက” နင်”
” နင့်” အချစ်ကေ၇ာ ဘာလဲ..?
In: ကဗျာ Posted By: chitma Date: May 25, 2011
Leave comment 10 Comments & 344 views
By: poem.jinx28 at May 25, 2011
By: ဖြူဖြူလေး at May 25, 2011
By: Zaw Thet Oo at May 25, 2011
ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရယ်လို့ မသိနိုင် တဲ့ အလွမ်းလေးတစ်ခု …..
By: မိုးဝေ at May 26, 2011
အ၇မ်းကောင်းပါတယ် ..တီလေး ..
By:ုko min at May 27, 2011
အမ ဖတ်နေ၇င်းနဲ့လေ ၇င်ထဲမှာ ဖော်ပြလို့ မ၇နိုင်တဲ့ ခံစားချက် တစုံတ၇ာ အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာမိတယ်။အဲဒါက တမ်းတခြင်းလား….လွမ်းဆွတ်ခြင်လား….မဝေခွဲနိုင်တော့ဘူး။ တကယ်တမ်းတော့လေ ကျေကွဲခြင်းနဲ့ တဖန်မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တယ်။
By:ုkyawkyaw at May 28, 2011
အမဖြူရေ အတိတ်ကိုဆွေး မတွေးလေနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြန်မလာဘူး။ အနာဂါတ်မှန်း မလွမ်းလေနဲ့ အနာဂတ်ဆိုတာ မသေချာဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကံဉာဏ်ကြိုးကုတ် လုံ့လထုတ်ရင်………………………………
သြော် ……အချစ်…အချစ်.. မခေါ်ဘဲသူလာ မနှင်ဘဲသူထွက်သွား ကျန်ရစ်သူမှာ လွမ်းရစ်ပူပွါး။ အချစ်ခံရသူက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ချစ်မိတဲ့သူကတော့ ရောက်မယ်မထင်လည်း မျှော်၊ လာမယ်မထင်လဲ စောင့် နေဆဲ။ ချစ်တိုင်းညားပြီး ညားတိုင်းချစ်ကြပါစေ……
By: မိုးထက် at May 28, 2011
khaw le ma khaw bu.
ti le ma ti ke bu.
thu bar tar thu win lar de.
thu bar tar thu htin chin yar htin sate le soe tat tay de.
moung toak tar le shi tay de.
ma ti chin yaung saung pau le loak tat tay de.
thu bar tar thu sate to p htwak twar pyan yaw.
bar hman ko ti dot bu.
By: ei lay at Sep 3, 2011
∆ ဒဏ်ရာ နဲ့ အမှား
မေတ္တာ နဲ့ အမှန်
‘ ငါ့ ‘ ရင် တံခါး ကို
ဘယ် ဝတ္ထု က ခေါက်လိုက် တာလည်း ?
‘ ငါ ‘ …. အခုထိ ………∆
By: lwan at Nov 5, 2011
i m dying to miss sooooooooooooo much.